काठमाडौं। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले स्थायित्वका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन आवश्यक रहेको बताएका छन्। मंगलबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा थापाले अस्थिरता पैदा हुने अवस्था आएकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताए। उनले अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री हटाउने प्रयास गरेर अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजिएको आरोपसमेत लगाए।
सरकारलाई काम गर्न अवरोध गर्न खोजिँदा संसद विघटन गर्न बाध्य हुनुपरेको उनको भनाइ छ। ‘प्रतिनिधि सभा राजनीतिलाई अस्तिरतातर्फ धकेल्ने संयन्त्रमा बदलियो। त्यसकारण यसको औचित्य सकियो,’ उनले भने, ‘संविधानले राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थायित्व प्रदान गर्छ। अस्तिरता पैदा भएको हुनाले संसद विगटन गर्न जरुरी थियो। नयाँ संसदको स्थापना गरौं। आजको सही राजनीतिक कदम हुन्छ। मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अग्रगामी कदम हो।’
थापाले क्रान्तिकारी विचार नीति र त्यसको कार्यान्वयन, एकताको पक्ष नै अहिले सही बिचार भएको तर्क गरे। ‘जुन सदनमा नेकपाको दुई तिहाइको मत थियो। त्यसलाई विभाजित गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गर्ने नीति वा कदम सही थियो वा गलत ?’ उनले भने, ‘यो प्रश्नको जवाफ हामीले दिनुपर्ने भएको छ। हामी परिवर्तन चाहान्छौं। समाजवादी समाजको निर्माण गर्न चाहान्छौ भने यो प्रश्नको ठीक जवाफ दिन जरुरी छ। तपाईँ बीचमा बस्न सक्नुहुन्न।’
प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई गुटको संज्ञा दिँदै उनले अगाडि भने, ‘हामी पार्टीको पक्षमा उभिने कि गुटको पक्षमा उभिने ? नेकपा फुट्नु र फुटाउनु ठिक थियो त ? नेकपा फुटाएर देशको विकास सम्भव छ ? नेकपा संसदीय दललाई विभाजन गरेर र नेकपाको नेतृत्वलाई अपदस्त गरेर सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर के देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ ? देश विकासको दिशामा अघि बढ्न सक्छ ? यो प्रश्न हाम्रो अगाडि उभिएको छ। स्थिरताको पक्षमा उभिने कि अस्थिरताको पक्षमा उभिने ?’
अध्यक्षलाई कारवाही गर्दा प्रतिगामीले फाइदा लिने उनको भनाई थियो। ‘एकथरीले अध्यक्षलाई कारवाही गर्ने नीति लिए, त्यो सही हो त ? त्यसले एकता कायम राख्छ त ? त्यसको फाइदा प्रतिकामीले लिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को प्रश्‍न प्रमलाई बीचमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु आवश्यक हो ? यसले देशलाई कता लैजान्छ ? यो कदम सही वा गलत ? संसद विगटन पश्चगामी हो कि अग्रगामी यो अवस्थामा ? औचित्य सकियो संसदको।’